BAOLINA KITRA – FIFIDIANANA :: Hofaritan’ny fihaonan’ny minisitera sy FMF ary ny CEN ny fotoana • AoRaha
BAOLINA KITRA – FIFIDIANANA Hofaritan’ny fihaonan’ny minisitera sy FMF ary ny CEN ny fotoana
Mivoatra haingana ny raharaha. Hiara-handinika ny fotoana sy ny toerana hanaovana ny fifidianana tsy tanteraka tany Sambava ny minisitera sy ny komity mpanatanteraky ny Fede­rasiona ary ny vaomiera misahana ny fifidianana, araka ny fanambaràna farany nataon’ ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra, omaly takariva.
Efa naneho ny faha­vononany hiatrika ny fifidianana ireo filohana ligy efatra ambin’ny folo sy ny vaomie­ram-pifidianana, araka ny nambaran’izy ireo omaly maraina teny amin’ny lapan’ ny Fanatanjahantena Mahamasina, nandritra ilay fanelanelanana nataon’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena. “Tsy avy aty aminay ny sakana”, araka ny nambaran’ireto filohana ligy ireto. “Ny komity mpana­tanteraka no tokony hanondro ny toerana hanaovana izany satria izy ireo no mian­toka ny vola holaniana”, araka ny nambaran’ny avy eo ani­von’ ny vaomieram-pifidianana.
Amin’ny fiverenan’ny fifidianana toy izao dia mpifidy roa ambin’ny folo sisa no andrasana dia azo tanterahina izany, rehefa tsy tratra ny fetr’isa dimy ambin’ny folo tamin’ny tany Sambava ka nitarika ny fihemorana. Tsy isan’ireo nanatrika an’ity fanelanelanana ity ny iraka manokan’ny Fifa sy Caf na dia nasaina aza. “Hanome ny heviny momba izao olana izao izy ireo”, araka ny nambaran’ny avy eo anivon’ny minisitera teny amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena.
“Tsy mitsabaka amin’ny raharaham-pifidianana izahay fa manelanelana mamaha olana fotsiny ihany”, hoy ity farany nanitsy. Raha ny tsilian-tsofina dia aorian’ny fifidianana filoham-pirenena no hanatanterahana ny an’ny federasiona.
Voley-ball – fifidianana Hoentin’ny mpilalaon’ny AS Voara fahiny ny Federasiona
Baolina kitra Nofoanan’ny Fifa ny fandraisan-tanana tsy nahy
“Ultra trail des ô plateaux » Hifaninana amin’ny kalaza malagasy ny tompondakan’i Frantsa
Rafi-pitantanana isam-paritra Noesorina teo amin’ny toerany avokoa ireo Préfet-n’ny polisy eran’i Madagasikara
LOZA VOAJANAHARY :: Kaominina roa ravaravan’ny rambon-danitra tany Manakara
FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA :: Hisoritra eny amin’ny Ceni, raha afaka efatra andro ny fironan’ny vokatra